I-Verdi ye-Opera ye-1853 kwiZenzo ezine
U-Il Trovatore wabhalwa ngo -1853 nguGiuseppe Verdi . Yaqala ngoJan 19, 1853 e Teatro Apollo, eRome, eItali kwaye iqhutywa kwidolophu yaseSpain yekhulu le-15.
Kwindawo yokulinda kwiNdlu yeAragon, uCaptain Ferrando uyalela amadoda akhe ukuba alinde uManrico, umdaka, kunye notshaba luka-Count di Luna. di Luna isinyazela ngaphandle ngaphantsi kweGumbi likaLona Leonora elinde uManrico ukuba afike.
di Luna uthandana noLeoraora, kodwa uthanda uManrico. Ngomgudu wokugcina abalindi bengalali, uFerrando uxela ibali lembali ka Count. U-Count wayenomntakwabo omncinci owayenobuthakathaka waza wagula ngumfazi ongu-gypsy iminyaka emininzi edlulileyo. Ngenxa yoko, ukumkani wayenomgwebo wokufa waza watshiswa kwisibonda. Njengoko watshisa, wayala indodakazi yakhe, u-Azucena, ukuba ayiphindise. U-Azucena wamthumba umntwana waza wamphonsa emgodini womlilo ukutshisa kunye nonina. Nangona amathambo omntwana atholakala emlothweni, ukumkani akazange akholwe ukufa kwonyana wakhe. Emva kokufa kwakhe iminyaka emininzi kamva, wamyalela unyana wakhe, di Luna, ukuba afune u-Azucena.
Ngaphakathi egumbini likaLonora, uxela umngane wakhe, Ines, kwaye umxelela ukuba uyamthanda uManrico. Nangona i-Ines ibonisa ukukhutshwa, uLooraora uyababetha. ULeonora uva ilizwi likaManrico ngaphandle ngaphandle kwaye ugijime ngaphandle ukumbulisa.
Ebumnyameni, iphosakele kwiLuna kuManrico, kodwa ngokukhawuleza uManrico uvela. Ukhawuleza ugijimela ecaleni lakhe ukuze amthobele. Ngomsindo, i-Luna idlala i-duel. UManrico uyamkela, nangona uLeoraora wenza konke akwaziyo ukumisa i-duel. Amadoda amabini aya kulala ebusuku.
Ekukhanyeni kokuntwela kokusa, uManrico uhleli ngasecaleni lomama wakhe emkampini we-gypsy, kwaye i-gypsies ivakala ingoma i-chorus eyaziwayo.
Sisakhumbula isikhalazo sikamama sakhe sokuphindiselela, u-Azucena utshela uManrico ibali elitshintsha ubomi. Uyabatshela ukuba xa efuna umntwana wenkosi, wayibamba ngephutha umntwana wakhe wamphonsa emgodini womlilo. Nangona uManrico eqonda ukuba akayena unyana wakhe wezilwanyana, ufunga ukuba uthando lwakhe kuye aluguqukanga. Emva koko, wayehlala ethanda yaye ethembekile kuye. Ufungela unina ukuba uya kumnceda afune impindezelo, kodwa akazange akwazi ukubulala iLuna. Nangona uManrico enqobile i-duel, uxelela ukuba wayeva amandla angaqhelekanga eze kuye, ammise ekubeni athathe ubomi bukaLuna. Emva kwexesha, umthunywa ufika ezisa iindaba zokuthi uLeoraora, ekholelwa ukuba uManrico ufile, ungene kwiqonga. Ezimisele ukummisa, ukhawuleza waya kuLeonora naphezu kokuchaswa ngumama.
Ngaphandle kwendawo yokuhlala, i-Luna icebe icebo lokubamba uLeonora. Ukuthanda kwakhe ukutshisa ngakumbi nangaphambili. Njengoko uLeoraora kunye namadongeni benza indlela yabo ngaphakathi, iLuna ibeka isicwangciso sayo. Nangona kunjalo, u-Manrico ufika nje ngexesha lokugcina uLeoraora, kwaye abo babini baphakamisa isandla ngokukhawuleza, basinda kwiLuna kunye namadoda akhe.
UDi Luna usemise inkampu kungekude apho uManrico noLeoraora bahlala khona.
UFerrando uletha u-Azucena emva kokumfumana ehamba ngaphandle. Uthi ukhangele unyana wakhe olahlekileyo. Xa i-Luna idalula ubunikazi bakhe, u-Azucena uhlaselwa. Ngaloo mzuzwana, uFerrando uyamqonda njengombulali womntakwabo kaLuna. UDi Luna umyalela ukuba atshiswe kwisibonda.
UManrico noLeoraora banomdla ngokunyanisekileyo kwaye bazimisele ukubeka izandla zabo komtshato. Njengoko bathetha izibhambathiso zabo, umngane kaManrico, uRuiz, uya kubaxelela ukuba u-Azucena wabanjwa waza wagwetywa ukutshiswa kwisibonda. UManrico uyeka yonke into aze afune ukunceda.
Xa uManrico efika ngaphandle kwejele likaMama, naye wabanjwa. URuiz uzisa uLeoraora entolongweni apho afunga khona ukumsindisa. Kungekudala emva koko, u-Luna ufika. Ukungafuni nto ngaphandle kwenkululeko yakhe yintando, uyazifungela ukuba u-Luna, kodwa ngokufihlakeleyo, uguqula utyhefu .
Akayi kuvumela i-Luna ukuba ibe nayo.
Ngaphakathi kweseli yabo, uManrico uyathuthuzela umama wakhe osekhulile, oye waqala ukulala, ephupha iintsuku ezithandekayo. U-Leonora ufika kwaye unxusa uMrico ukuba abaleke. Nangona kunjalo, emva kokufunda indlela eye wakwazi ngayo ukwenza oku, uziva ukhashelwa kwaye wenqaba ukushiya iseli lakhe. Ngexesha elithile, iziphumo zetyhefu ziqala ukubonisa kwaye uLeonora uwela kwizandla zikaManrico. Utshela uManrico ukuba ufanele aphile ezandleni zakhe kunokutshata omnye umntu. di Luna uyangena kwiiselingi emva kokuba uLooraora efa kwaye ubona umzimba wakhe ongenamphilo kwizandla zikaManrico. Uyalela amadoda akhe ukuba abulale uManrico. U-Azucena uvela xa ebona ukuqhutyelwa kwakhe kwenzelwa kunye nokumemeza ukuba unina uye wabuyisela, kuba uLun uLuna ubulele umntakwabo!
Ukuba Uthande i-Tro Trooreore
Ukuba uthanda i-Il Trovatore, ngoko ungathanda iVerdi " La Traviata ," iPuccini " iTosca ," kunye noDonizetti " uLucia di Lammermoor ."
I-Synopsis yeVerdi's Opera, iYerusalem
Izipho eziPhambili zeePivili ngaphantsi kwe-$ 100
I-Montana Tech Admissions
Isifundo seSithombe: Indlela yokubamba i-Twist Serve